LEGO NINJAGO Black Friday သဘောတူညီချက်များ ၂၀၂၁ Brick Fanatics
၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည် Lego Ninjago - ဒီလိုပါပဲ Lego အုပ်စုလိုက်အခါသမယတစ်ခုခုကိုဆင်နွှဲပါ Black ကသောကြာနေ့အပေးအယူ? ဒီမှာငါတို့တွေ့ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာအားလုံး Lego Ninjago ယခုနှစ် Black Friday နှင့် Cyber ​​Monday တို့တွင်နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိရှိသည်။
LEGO NINJAGO Black Friday သဘောတူညီချက်များ
၎င်း၏အကြီးဆုံး set မှယနေ့အထိရွှေနှစ်ပတ်လည် minifigures အပိုင်းအခြား၊ Lego Ninjago ၎င်း၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနှစ်တစ်နှစ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ မင်းမှာနေရာ (သို့) ဘတ်ဂျက်မရှိရင်တောင် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ်အပါအ ၀ င်သေးငယ်သည့်စျေးနှုန်းများတွင်ပင်မယုံနိုင်စရာအစုံများရှိသည် 71738 Zane ရဲ့ Titan Mech တိုက်ပွဲ နှင့် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ.
Black Friday အတွက်ဒီနှစ်အတွက်မည်သည့်ဝတ်စုံများကိုလျှော့ပေးမည်ကိုအာမခံချက်မရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ချင်သည် Lego အုပ်စုလိုက် ဦး ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်ခြင်းသည်တောက်ပသောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သည် Ninjago အနည်းဆုံးနှစ်စုံသဘောတူညီမှုများနှင့်အခမ်းအနားများ - ၎င်းတို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အစုံများတွင်ရှိနေလျှင်ပင်ကောက်ယူရန်အလွန်ထိုက်တန်သည်။
LEGO NINJAGO Legacy Black Friday သဘောတူညီချက်များ
၁၀ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းမရှိတော့ပါဘူး Ninjago ၎င်း၏ခေတ်သစ်ဗားရှင်းများထက် classic အစုံ၊ အဲဒါကဘာလဲ Ninjago အမွေအနှစ်လိုင်းသည်အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏အစုံများစွာရှိသည် စင်ပေါ်စွန့်ခွာရန်ကြောင့် အပါအဝင်ယခုနှစ် 71703 မုန်တိုင်းတိုက်လေယာဉ်တိုက်ပွဲ, 71704 Kai တိုက်လေယာဉ် နှင့် 71705 Destiny ရဲ့ကျေးဇူး Black Friday ကိုရောင်းလို့ရတဲ့အရာတွေအားလုံး
LEGO NINJAGO Season 14 Black Friday သဘောတူညီချက်များ
ထက်မြက်သောလှိုင်း၏ Lego Ninjago Season 14 အတွဲများသည်မတ်လတွင်ပွဲ ဦး ထွက်သာဖြစ်သောကြောင့် Black Friday အတွက်အဓိကလျှော့စျေးများကိုမျှော်လင့်ရန်စောလွန်းပေမည်။ ဟိ Lego အုပ်စုသည်စျေး ၀ ယ်ရန်အကြောင်းပြချက်များနှင့်အမြဲလာလေ့ရှိသော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ဆ VIP အမှတ်များနှင့်လက်ဆောင်များ ၀ ယ်ယူခြင်းအပါအ ၀ င်၎င်းသည်ကောက်ရန်အလွန်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ 71746 တောတွင်းနဂါး, 71748 Catamaran ပင်လယ်စစ်တိုက် et al ကောင်းတာကိုဘယ်သူကမှမချစ်ဘူး Lego Ninjago နဂါး?
Lego Ninjago City Gardens Black Friday သဘောတူညီချက်များ
တို့တွင်သရဖူကိုယူသည် Lego Ninjago အရွယ်အစား၊ အပိုင်းအရေအတွက်နှင့်စျေးနှုန်းအစုံ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် ဆောင်ပုဒ်၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အတွက်တကယ့်အောင်ပွဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကိုးကားချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် classic Ninjago အစုံများနှင့်တီဗီရှိုးများတွင်ရွှေဝူရုပ်ပုံသေးငယ်နှင့် The နှင့်အတူစုံလင်စွာပါ ၀ င်သည် Lego Ninjago Movie စုံ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City နှင့် 70657 Ninjago City ဆိပ်ကမ်းများ။
အဆိုပါ Lego Black Friday အတွက်သတ်မှတ်ထားသော£ 274.99 / $ 299.99 / € 299.99 ၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုမပြုလုပ်လျှင်စျေး ၀ ယ်ပိတ်ရက်တွင် ၀ ယ်ခြင်းအား ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့် VIP အပိုပစ္စည်းများကိုသင် ၀ ယ်ယူပါကအနာဂတ်ကို ၀ ယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းမှ ၀ ယ်ယူသည့်မည်သည့်လက်ဆောင်များအတွက်မဆိုလွယ်လွယ်ကူကူရလိမ့်မည် Lego Group မှ၎င်း၏လက်တက်ရှိပါတယ်။
LEGO NINJAGO minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ
ဒီနှစ်ထဲမှာ Seasons 14 နဲ့ 15 တို့မှာပြသနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကျွန်းပေါ်ကနင်ဂျာတွေ၊ scuba gear တွေပါပါတယ် Lego Ninjago ဇာတ်ကောင်များတွင်လှပသောရွှေ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် minifigures များပါ ၀ င်သည် Lego Ninjago အမွေအစုံ။ မင်းရဲ့စုဆောင်းမှုထဲကချီးကျူးစရာနင်ဂျာတစ်ခုခုကိုမင်းလွဲရင် Black Friday ကလျှော့စျေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ VIP VIP အမှတ်နဲ့လက်ဆောင်နှစ်ဆကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အငြိမ်းစား LEGO NINJAGO သည် Black Friday သဘောတူညီချက်များသတ်မှတ်သည်
14 ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း Lego Ninjago အစုံရှိပါတယ် အနားယူရန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်၎င်းသည်အလားအလာရှိသော Black Friday သဘောတူညီချက်များအတွက်၎င်းတို့ကိုအဓိကကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်စေသည်။ ဟိ Lego Group သည်၎င်းတို့၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင်အစုံများပေါ်တွင်စျေးနှုန်းများကိုနှိမ့်ချခြင်းကိုနှစ်သက်ကြောင်းပြသသည်၊ ထို့ကြောင့်စျေးဆစ်ခြင်းကိုသတိပြုပါ။ 71705 Destiny ရဲ့ကျေးဇူး, 71721 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာရဲ့နဂါး, 71722 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာ ပြီးတော့ဒီ Black Friday
ငါတို့ဒီ page ကိုအားလုံး update လုပ်လိမ့်မယ် Lego Ninjago Black Friday သည်သူတို့ကြေငြာသည့်အတိုင်းအပေးအယူရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ကြည့်ပါ။ အားလုံးအတွက် Lego Black Friday ၂၀၂၁ နို ၀ င်ဘာလတွင်ငါတို့မျှော်လင့်သည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.